Nzira Yokudzivirira Nayo Akaundi Yangu pa Twitter? ▷ ➡️ Vateveri ▷ ➡️
Dai 12, 2021 0 mashoko 553
Mushandisi, akambosimbisa kuti Akaunti yake yeTwitter ine kuchengeteka kwako kwakakanganiswa, unokurudzirwa kutora matanho anotevera Kuchengetedza Akaunti yako: Rasa maTweets asingadiwe akatumirwa apo kuchengetedzwa kwakakanganiswa.
Uyezve, ongorora PC yako kuti uone mavairasi uye malware, isa zvigamba zvekuchengetedza pane yako sisitimu yekushandisa uye zvishandiso, gara uchishandisa nyowani nyowani nyowani, funga nezve sarudzo yekushandisa login revhisi.
En kuongorora kwekupinda, Mushandisi ane mukana wekuunza chechipiri cheki kuti ave nechokwadi chekuti iye chete ndiye anokwanisa kuwana yake Akaunti yeTwitter uye kwete yechitatu mapato, nechinangwa chisina kunaka chekukuvadza.
Kushungurudzwa pamhepo papuratifomu ye Twitter
Mamiriro ezvinhu mazhinji anogona kuitika mune yemagariro network Twitter; senge, semuenzaniso: Kushungurudzwa Pamhepo. Kune vashandisi veTwitter vanga vari Kushungurudzwa Pamhepo; Kana Mushandisi achiziva munhu anotambura, anogona kumubatsira nekutaura Matipi anotevera anopiwa ne Twitter:
Mushandisi anofanira kuedza nzwisisa mamiriro acho ezvinhu, kukuteerera nokungwarira uye kutora mamiriro ako zvakakomba; Ita kuti munhu wacho atsvage rubatsiro rwehunyanzvi: Therapist, gweta, mapurisa kana mumwe munhu anovimbwa, vane nzira dzekuvatungamira nekuvandudza mweya wavo.
Semutariri, Mushandisi ane sarudzo yekusave nehanya neKushungurudzwa Pamhepo uye kutsvaga kuchengetedza munhu akabatwa, nekumutsigira mumanzwiro avo; pakupedzisira, taura zvirimo paTwitter uchitevera rairo papuratifomu ye Twitter.
BHUKU UYE URI KUregeredza KUSHANDISA KWETE ONLINE
Kubatanidzwa nenhamba yakati wandei yevanhu kunogona kuve chiitiko chinopfumisa; asi zvakare inokweretesa kune iyo sosi ye kushungurudzika nekusanzwisisana kana mamiriro ehurukuro asinganzwisisike.
Kana Mushandisi achiona a Inogumbura tweet, zvinokurudzirwa kuti ufunge pamusoro pehurukuro, nyatso tarisa mamiriro eiyo Tweet, iri pfupi uye chinangwa chemunyori chingangodudzirwa zvisizvo; Zvakare, pindura iyo Tweet kuti ubatanidze hurukuro uye utaure zvaunofunga.
Mushandisi ane sarudzo pane yeplatifomu yeTwitter yekuBlock uye Kurega Akaunti yeayo maTweets anogumbura. Paunovhara Mushandisi, haugamuchire chero ruzivo kubva kwaari; Iwe hauzozvionawo mukubata kwako kwenguva. Ini ndinokurudzira kungoregeredza.
Mushandisi haawanzo kuda Bata Twitter yemhinduro yechero dambudziko, sezvo iyo Twitter chikuva inovimbisa iwe zvese zvishandiso, kuraira, sarudzo uye nongedzo yekufamba netiweki yako nerunyararo rwepfungwa uye kunakidzwa zvizere.
Zvisinei, pane dzimwe nguva apo Mushandisi chete asingakwanise kugadzirisa matambudziko izvo zvinokutambudza iwe pasocial network uye unofanirwa Bata Twitter kuti ugamuchire rubatsiro runodiwa kubva kune vako nyanzvi nyanzvi
Twitter inopa Mushandisi yayo Rubatsiro Center iri muchikamu chewebsite yako; Pano inotsanangura nhanho nhanho chiito chega chega icho Mushandisi chaanoda kutora kugadzirisa matambudziko akasiyana anomukundisa mukushandisa kweTwitter.
1 Kushungurudzwa pamhepo papuratifomu ye Twitter
2 BHUKU UYE URI KUregeredza KUSHANDISA KWETE ONLINE
3 Bata Twitter